Waligaa ha ku tiirsan dadka kale. - qarsoodi - Quotes Pedia
Waligaa ha ku tiirsan dadka kale. - Qarsoodi
Nolosha, keligeed ayaanu iska nimaadnaa oo kelinaa iska tagnaa Sida noloshu u socoto, waxaan sameyneynaa xiriiro badan. Inbadan oo iyaga ka mid ahi waa kuwo aad noo qiimo badan sidaas darteedna jiritaanka wada noolaanshuhu. Laakiin waa in noloshu aysan micno lahayn, oo ah inaan ku tiirsannahay qof aan nafteenna isku hallayn karin.
Marwalba ogow, inaan nahay taageeradayada ugu weyn. Cid kasta oo naga tagta, ma dareemi doonno kaalmad la'aan, haddii aan nafteena ka dhigno awood aan ku wajaho wax kastoo jidkeena soo socda. Si tan loo gaaro, waxaan u baahan nahay inaan dhisno xoog maskaxeed.
Waa inaan maskax ahaan awood u lahaan karnaa inaan wajaho dhibaato kasta oo timaadda. Sidoo kale waa inaan jir ahaan ku habooneynaa inaan ka hortagno arrimahan. Sidaas darteed, waxaan u baahan nahay inaan ku mashquulno is-daryeel. Tani kama dhigna in qofku noqdo keli-talisnimo, laakiin is-daryeelidda ayaa muhiim u ah koritaanka qofka.
Markii aad ku sii tiirsanaato hal qof, waxaad u maleynaysaa qofkaas inuu daryeeli doono dhibaatooyinkaaga. Laakiin sabab kasta ha noqotee, qofka kale, si kastoo uu u dhow yahay, waxaa suuragal ah inuusan awoodi doonin inuu sii wado ballantooda. Haddii aannan diyaar u aheyn xaalad noocaas ah, markaa waxaan ku adkaan doonnaa xitaa inaan falcelinno, iska daa in aan wax ka qabanno.
Sidaa darteed, waxaa had iyo jeer lagula taliyaa inaadan ku tiirsan kuwa kale. Haddii aan dareemno inaanaan haysan xirfad gaar ah oo naga celineysa inaan wax qabanno, markaa halkii aan aqbali lahayn xirfadda la'aan sida guuldarro, waa inaan ka shaqeynaa horumarinta xirfaddaas. Tani waxay naga caawin doontaa inaan sare u qaadno nafteena qof ahaan iyo noo qalabe si aan isku kalsooni badan.
Xigashooyinka gaagaaban ee ugu wanaagsan abid
Ku tiirsada xigashooyinka
Xigashooyinka Ku tiirsanaanta
Xigashooyinka kalsoonida gaagaaban
Xigashooyinka gaaban ee dhiiri galinta ah ee shaqada
Erayo gaaban oo dhiirigalin ah
Xigashooyinka Guusha Gaaban
Xigashooyin xigmad gaaban
Erayada Gaaban ee Xikmadda
Quotooyin Gaaban oo Adag
Dabeecad wanaagsan waxay caawineysaa isku xirnaanta udhaxeysa awooda iyo hamiga. - Qarsoodi
Kulligeen waxaa ina wada barakeeyey kartida iyo hibada kala duwan. Markii aan sii korayno, ayaa naloo soo qaaday…
Diidmo cad ayaa had iyo jeer ka wanaagsan ballan qaad been abuur ah. - Qarsoodi
Diidmo cad ayaa had iyo jeer ka wanaagsan ballan qaad been abuur ah. - xigashooyinka aan la aqoonsanayn:
Waligaa ha ku soo dhowaanin qofna ilaa ay sidoo kale dareento inay isku mid kuu yihiin, maxaa yeelay hal aragti oo hal dhinac ah ayaa maskaxda kaa halligi kara. - Qarsoodi
Weligaa qofna ha ugu dhawaan qofna! Haa, uma badna inaad garaneyso illaa iyo inaad ka timaadid…
Samir. Waxyaabaha wanaagsan ayaa waqti qaata. - Qarsoodi
Samir. Waxyaabaha wanaagsan ayaa waqti qaata. - xigashooyinka aan la aqoonsanayn:
Karma - ka fikir figradaha wanaagsan, dheh wax fiican, wanaag u samee dadka kale. Wax walba way soo noqdaan. - Qarsoodi
Karma - ka fikir figradaha wanaagsan, dheh wax fiican, wanaag u samee dadka kale. Wax walba way soo noqdaan. - Laxiriirta aan lagaran…